Digital Marketing Agency in Myanmar | Open More Online
Online Marketing & Advertising Agency Myanmar
We’re Top Digital Marketing Agency in Myanmar. We do providing Online Marketing, Online Advertising, Facebook Marketing, SEO & SEM, Web Development, Messenger Marketing, Messenger Ecommerce, Email Marketing, and so on. Especially our Case Studies of client successes are based on Facebook Marketing, Online Advertising and seo optimization. HapEye
မိတ်ဆွေအတွက် Digital Marketing ဝန်ဆောင်မှုအားလုံးကို
အပြီးအစီး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော မြန်မာ့ထိပ်သီးအေဂျင်စီ
Don’t Miss Free Services
Build eCommerce For Free
ဝန်ဆောင်မှုအရမ်းကောင်းပါတယ် လိုချင်တဲ့အတိုင်းရအောင် လုပ်ပေးတဲ့အပြင် client စိတ်ကြိုက် ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်ပေးတဲ့အတွက် စိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်အဝ ရခဲ့ပါတယ်။ လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ Digital Marketing အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလို့မြင်မိပါတယ်။
Sai Wai Lin HtunMonomax Myanmar
Client အပေါ် အမြဲစိတ်ရှည်ပြီး Planning, Creative Thinking, Design & Content Writing တွေအားလုံး ကောင်းမွန်ပြီး Customer service အရမ်းကောင်းပြီး အစစအရာရာ စိတ်တိုင်းကျတဲ့အထိ ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ agency ပါ
Wint Thandar MaungMya Ngwe San
Social Media Marking company တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုပါ။ ဝန်ထမ်းတွေက Ownership စိတ်အပြည့်ရှိတယ်။ လိုချင်တာတွေကို စိတ်တိုင်းကျတဲ့အထိလုပ်ပေးတယ်။ Very Impressive Service ပါဘဲ။
DigitalMarketing.com.mm powered by Hap Eye Co., Ltd. has been developed our website since4years, that is msmyanmar.net and their development team is very creative and powerful.
U MYO NAING OOMS Myanmar Trading, Travels & Tours Co., Ltd.
More Clients' Voice
2020 Best Digital Marketing Strategy
Facebook Marketing သင့်လုပ်ငန်းကို Facebook မှာ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ နည်းဗျူဟာ၊ ကြော်ငြာ၊ ဒီဇိုင်းများ ဖန်တီး‌ပေးပါတယ်။
Store Information and Technology
Web Development Online Marketing ရဲ့ ပင်မဖြစ်တဲ့ Website ရေးဆွဲပြီး သင့်လုပ်ငန်းပုံရိပ်ကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
Auto Reply and Customer Services
Messenger Marketing ၂၄ နာရီ အလုပ်လုပ်ပေးမယ့် Chatbot တည်ဆောက်ပြီး ဝယ်သူတွေကို လက်မလွတ်သွားဖို့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
SEO Optimization သင့် Website မှာ ဝင်ရောက်သူ များပြားပြီး ရောင်းအားတက်စေဖို့ SEO လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Messenger E-commerce ပစ္စည်းစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီး Order တင်တဲ့အထိ Messenger မှာ အပြီးအစီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Popular is the brand
Business Branding ဝယ်သူတွေရဲ့ မသိစိတ်ထိ ဝင်ရောက်ကြော်ငြာဖို့ သင့်လုပ်ငန်းကို Branding လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သင့် Clients တွေရဲ့ ပြဿနာတွေကို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့် ရှိပါတယ်။
သင့်ဆီ ပစ္စည်းရောင်းဖို့ ရောက်လာသူနဲ့ ကူညီဖို့ ရောက်လာသူ ဘယ်သူ့ကို သင်ပိုပြီး နှစ်သက်ပါသလဲ။ သင့် ကာစတမ်မာတွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ လူတိုင်း ရောင်းနေတဲ့အချိန် သင်က ကူညီပါ။ ဝယ်ပါ၊ သုံးပါ၊ တရစပ်အော်ပြီး သူ့ထက်ငါ အပြိုင်ရောင်းနေတဲ့ကြားမှာ သင်က ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေပါစေ။
Build your success business
မြန်မာမှာ လူသုံးအများဆုံး Social Media ဖြစ်တဲ့ Facebook မှတဆင့် သင်လုပ်ငန်းကို Marketing လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ မာကတ်တင်း နည်းဗျူဟာ၊ ကြော်ငြာ၊ ဒီဇိုင်းများ ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင့် ပစ်မှတ်ဈေးကွက် ရှိရာကို မှန်ကန်ထိရောက်တဲ့ Content များ ဖန်တီးပို့လွှတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ရအောင်လုပ်ခြင်း၊ အမာခံဖောက်သည် လူအုပ်တောင့်လာစေဖို့ စဉ်ဆက်မပြတ် Content များဖန်တီးပြီး ရင်းနှီးမှု တည်ဆောက်ခြင်း၊ သင့် ပစ်မှတ်ဈေးကွက် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို Content များမှတဆင့် ဖြေရှင်းပေးပြီး သင့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို ပြသခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်များကို Facebook သုံးပြီး လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဖောက်သည်တွေ နေ့စဉ်အချိန်ဖြုန်းနေကျ နေရာဖြစ်တဲ့ Messenger မှာ သင့်ကိုယ်စား 24 နာရီ ပိတ်ရက်မရှိ အလုပ်လုပ်ပေးမယ့် Chatbot တည်ဆောက်ပြီး Marketing လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အချိန်ကုန်၊ လူပင်ပန်း သက်သာပြီး ဝယ်သူတွေ လက်မလွတ်သွားဖို့ သိလိုသမျှကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အကြောင်းပြန်ခြင်း၊ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ ဝန်ဆောင်မှု/ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် အမေးများတဲ့ မေးခွန်းများကို Message Flow များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဝယ်သူများနှင့် ရင်းနှီးမှုတည်ဆောက်ရန် Message Campaign များဖန်တီးပေးပို့ခြင်း အစရှိသဖြင့် Messenger ကို အသုံးပြုပြီး စိတ်ဝင်စားသူ Leads များကို ဝယ်ယူသူ Customer များအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
What is Messenger E-commerce?
ကမ္ဘာ့နောက်ဆုံးပေါ် မာကတ်တင်းနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး Messenger မှာပဲ ပစ္စည်းရွေးချယ်တာကနေ Order တင်တဲ့အထိ အစအဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်မယ့် Ecommerce Store (ခေါ်) ဈေးဆိုင်ကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရောင်းချမယ့် Products တွေကို သူ့သက်ဆိုင်ရာ Categories အလိုက် စီစီရီရီ ခွဲထားနိုင်မယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းကို အရောင်/ Size/ Shape တွေအလိုက် ခွဲခြားပြီး ပြသနိုင်မယ်။ ပစ္စည်းရွေးချယ်တဲ့ အဆင့်ကနေ နောက်ဆုံးငွေပေးချေတဲ့အထိ အစမှအဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ လျော့ဈေးပေးဖို့အတွက် Coupon Code တွေထုတ်ပေးလို့ ရတယ်။ ဒီအချက်တွေအပြင် အခြားသော စွမ်းဆောင်ရည်တွေ အများကြီးကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့် Website ကို Search Results တွေရဲ့ ‌ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာ ထိပ်ဆုံးမှာပါဝင်ပြီး လူဝင်ရောက်မှု ပိုများလာဖို့ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဈေးကွက်မှာ လူရှာဖွေမှုများသော Keywords များကို စာရင်းပြုစုခြင်း၊ Web Pages များပေါ်တွင် Inbound Links, Outbound Links များတည်ဆောက်ခြင်း၊ Focus Keywords များသတ်မှတ်ပြီး Content Analysis လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Google Server တွင်စာရင်းထည့်သွင်းပြီး Urls Crawl လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ Google Business တွင် လုပ်ငန်းသုံး Profile နှင့် Backlinks များတည်ဆောက်ခြင်း အစရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
သင့်လုပ်ငန်းကို Online ကနေ စနစ်တကျ ချဲ့ထွင်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပြီး Marketing Channels တွေအားလုံးရဲ့ ပင်မအချက်အချာဖြစ်တဲ့ Website တစ်ခု ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
Website မှာ သင့်ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုတွေ အကြောင်းကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြထားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကာစတမ်မာတွေအတွက် ခိုင်မာတဲ့ လုပ်ငန်းပုံရိပ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။ Marketing လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ Leads စုဆောင်းခြင်း၊ အပြီးသတ်ရောင်းချခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ဝယ်သူတွေ ဘယ်လိုသတိထားမိလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားရလဲ၊ ဘယ်လိုအမြင်သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလဲဆိုတာ ဈေးကွက်မှာ Positioning လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Customer Service ဘယ်လိုပေးလဲ။ သင့် Staffs တွေရဲ့ ယူနီဖောင်း၊ Logo၊ Business Cards၊ Pamphlet စတဲ့ Marketing, Advertising အတွက် လိုအပ်ချက်တွေကို ဖန်တီးခြင်း၊ သင့်ကုမ္ပဏီက ဘာအတွက်ရပ်တည်နေတာလဲ၊ ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ ကွဲပြားထူးခြားချက်ကဘာလဲ၊ သင့် Brand Personality ကိုဘယ်လိုမျိုး သတ်မှတ်ထားမလဲ စတာတွေ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
We have experience working with large and small businesses. We are ready to
+ (Starter Package)
Commercial (or) Promotion Video Production
+ (Standard Package)